မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နွေဦး ပြန်လာ Pneumatic Actuator > မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator
AOX-P ကို စီးရီး မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuaသို့r ရှိ မြင့်သော အရည်အသွေး နှင့် ရှည်လျားသော ဘဝဖြစ်စဥ် သို့ တှေ့ဆုံ အဆိုပါ အခင်အရှင် auသို့mation market.Sတွင်ce 1997, AOX ရှိပါတယ် လုပ် တိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်မှု သို့ ပို့ အဆိုပါ မြင့်သောest အရည်အသွေး မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuaသို့r နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့ resကျွန်တော်တို့၏ces စီမံခန့်ခွဲမှု, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ ခဲ နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် Chတွင်a.
Openrating အပူချိန်: နျ Standard: -20Â° C + 80Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Lowtemperature: -40Â° C + 80Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
မြင့်မားသောအပူချိန်: -20Â° C + 150Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ခရီးသွားညှိနှိုင်းမှု: 90Â°မှာလည်ပတ်များအတွက်± 4A °၏ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေးရှိ
1. သိုလှောင်ဆင် & တောင်တော်အမွေးဒီဇိုင်း။
အဆိုပါသိုလှောင်ဆင် & တောင်တော်အမွေးနှင့်နှစ်ဦးကို piston မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြင့်မားသောပါဝါ output ကိုအတူ stably နှင့်လျှင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်အချိုးကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
AOX-P ကို၏ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသရုပ်ဆောင် actuators နှင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် actuators အားလုံးသည်အမျိုးအစားအတူတူဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆုံးဦးထုပ်နှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင် module ကိုအလွယ်တကူစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် demounting ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ရှိပြီးသားအဆို့ရှင်များပေါ်တွင် install ထားပြီးဖြစ်သော AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ယင်းအဆို့ရှင်အဖွင့်များ၏တည်နေရာများညှိနှိုင်းမှုစေနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့တိကျမှန်ကန်ပိတ်နိုင်၏ဘေးထွက်မျက်နှာပြင်မှာနှစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသောညှိ screw နှစ်ခု။
က ISO 5211, Din 3337 နှင့်ထုတ်ကုန် Interchange နှင့် solenoids, ကန့်သတ် switches များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများလွယ်ကူသောအထိုင်အဘို့အ VDI / VDE 3845: အောက်ပါနောက်ဆုံးပေါ်သတ်မှတ်ချက်များမှ 4. အပြည့်အဝထိန်းလိုက်နာအပ်သော။
ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင် AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator များအတွက်အကြံပြုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် 30-50% ဖြစ်ပါသည်
1. ကျွန်တော်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D ကိုအသင်းရှိစံဖှံ့ဖွိုးတိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန် R & D ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအဆုံးအဖြတ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင်းကိုငါသိ၏။
2. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator တိုင်းထုတ်လုပ်ဇာတ်စင်မှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးပြည့်စုံထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးစနစ်အားရှိသည်။
3. အသီးအသီး AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator အဘို့အသုတ်ကုဒ်ဖူး, ကောင်းတစ်ဦး traceability ရှိထားသည်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ။
Q: တကယ်ဘယ်လိုမကျင့်သောကြောင့်, ငါအမိန့်တော်ရှေ့မှာ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator တစ်နမူနာရနိုင်သင့်ရဲ့ actuator ရဲ့အရည်အသွေးပါသလဲ
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
ထိန်သိမ်း နှင့် တောင်တော်အမွေး နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator